आईकनलोकलाइज: नयाँ दर्शकहरूमा पुग्नको लागि तपाईंको व्यवसाय साइटलाई राम्रोसँग अनुवाद गर्नुहोस् Martech Zone
बुधबार, डिसेम्बर 23, 2020 बुधबार, डिसेम्बर 23, 2020 Douglas Karr
मेरो एजेन्सी एक द्विभाषी स्वास्थ्य सेवा सम्बद्ध कम्पनीलाई उनीहरूको साइट निर्माण गर्न, खोजीको लागि अनुकूलन गर्न, र उनीहरूको ग्राहकहरूलाई मार्केटिंग संचार विकास गर्न सहयोग पुर्‍याउँदैछ। जबकि उनीहरूसँग एक राम्रो वर्डप्रेस साइट थियो, मानिसहरू जो यो निर्माण गर्दछ मा निर्भर थियो मेशिन अनुवाद स्पेनी बोल्ने आगन्तुकहरूको लागि। त्यहाँ साइट मसिन अनुवाद संग तीन चुनौतिहरु छन्, यद्यपि:
Dialect - स्पेनिश मेशिन अनुवादले मेक्सिकनलाई ध्यानमा लिएन बोली यसको आगन्तुकहरु को।
टर्मिनलजी - मेशिन अनुवाद विशिष्ट चिकित्सा समायोजित गर्न सक्दैन शब्द शब्दावली.
औपचारिकता - अनुवाद, राम्रो छ, जबकि कुराकानी प्रकृति थिएन ... एक आवश्यकता यस ग्राहकको लक्षित श्रोताको लागि जब।
सबै तीनलाई समायोजन गर्न, हामीले मेशिन अनुवाद पछाडि जानुपर्‍यो र साइटको लागि अनुवाद सेवा भाँडामा लिनु पर्‍यो।
WordPress WPML अनुवाद सेवाहरू
संग WPML को बहुभाषी प्लगइन र एक महान WordPress विषयवस्तु (मौलिक) जसले यसलाई समर्थन गर्दछ, हामी साइटलाई सजिलैसँग डिजाइन गर्न र प्रकाशित गर्न सक्षम हुन्छौं र त्यसपछि डब्ल्यूपीएमएलको अनुवाद सेवाहरू समावेश गर्दछौं साइटको पूर्ण रूपले अनुवाद गर्नका लागि किफायती प्रयोग गरेर। ICanLocalize को एकीकृत अनुवाद सेवाहरू।
ICanLocalize एकीकृत अनुवाद सेवाहरू
ICanLocalize एक एकीकृत सेवा प्रदान गर्दछ जुन छिटो, व्यावसायिक र सस्तोमा छ। तिनीहरू 2,000 45 भन्दा बढी भाषाहरूमा काम गर्ने २,००० भन्दा बढी प्रमाणित, मूल अनुवादकहरू प्रस्ताव गर्दछन्। उनीहरूको दर पारम्परिक एजेन्सीहरू भन्दा धेरै कम छन् जुन केवल ठूला व्यवसायहरू स्वीकार गर्दछन् वा कुनै पनि प्रकारको म्यानुअल खाता सेटअप आवश्यक पर्दछ।
ICanLocalize सँग एकीकृत WPML अनुवाद ड्यासबोर्ड प्रयोग गरेर, तपाईं अनुवादको लागि वस्तुहरू चयन गर्न सक्नुहुनेछ र तिनीहरूलाई अनुवाद बास्केटमा थप्न सक्नुहुन्छ। शब्द गणना र लागत स्वचालित रूपमा गणना गरीन्छ र तपाईंको क्रेडिट कार्डमा तपाईंको आईसीनलोक खातामा चार्ज हुन्छ। अनुवादहरू लामबद्ध गरिएका छन् र तपाईंको साइट भित्र स्वचालित रूपमा प्रकाशित छन्।
WPML को साथ निर्मित WordPress साइटहरू बाहेक, ICanLocalize ले अफिस कागजात, पीडीएफ फाईलहरू, सफ्टवेयर, मोबाइल अनुप्रयोगहरू, र छोटो पाठ अनुवाद गर्न सक्दछ।
ICanLocalize को लागी साइन अप गर्नुहोस्
खुलासा: म यसको लागि मेरो सम्बद्ध लिंक प्रयोग गरिरहेको छु ICanLocalize.
टैग: सस्तो अनुवादअनक्लोकलाइज गर्नुहोस्एकीकृत अनुवादअनुवादअनुवाद सेवाहरूWordPress बहु भाषाWordPress प्लगइनWordPress अनुवादWordPress अनुवाद सेवाwpml